Fiparitahan'ny fitaovam-piadiana :: Nahatrarana basy ny miaramila iray mpiambina depiote teo aloha • AoRaha
Fiparitahan’ny fitaovam-piadiana Nahatrarana basy ny miaramila iray mpiambina depiote teo aloha
Tra-tehaka, tany Isandra, tamin’ny sabotsy alina lasa teo, ka efa voatazona any Fianarantsoa ny miaramila teo aloha sady niambina depiote iray teo aloha niaraka tamin’ny basy mahery vaika roa, basy lava na « fusil à pompe » iray sy basy poleta na « revolver ». Nilaza tamin’ ny mpanao famotorana ilay olom-boafidy teo aloha sady kandidà ho depiote any an-toerana fa: «tsy misy hidirany ny momba ireo basy tratra », ka navotsotra omaly ihany izy.
Nandritra ny fisavana ny fiara nitondra an’ity solombavambahoaka teo aloha ity sy olona maro nataon’ny Zandarimaria, tany Isandra, no nahitana ireo basy roa mahery vaika ireo. Avy hatra­ny dia nalefa tany Fianarantsoa ireo olona roa nitondra ny basy sy ilay olom-boafidy teo aloha.
“Rehefa natao ny famotorana dia fantatra fa serzà teo aloha sy kaporaly teo aloha niambina ny Filoham-pirenena tao amin’ny andron’ ny andiana mpiambina, tamin’ny Repoblika faha-II, na Resep ireto nitondra basy. Samy mbola voatazona ao Fianarantsoa izy roa lahy ireo ary hatolotra ny Fitsarana”, araka ny nambaran’ny loharanom-baovao akaiky ny famotorana.
Momba ny antony namo­tsorana ilay depiote dia nilaza ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena fa : “tsy izay olona tsy mitovy firehana politika akory dia hamoronana antontan-taratasy mba hamotehana azy”. “Fitondrana natao ho an’ny rehetra no mijoro ka rehefa hita fa tsy misy antony tokony hitazonana ilay olona dia avotsotra izy. Raha misy olona kosa manana porofo milaza manameloka ity olom-boafidy teo aloha dia tokony hitondra izany eny amin’ny mpanao famotorana”, hoy hatrany izy.
Loza teo am-pilomanosana :: Indray namoy ny ainy ireo olona telo tao amin’ny tokantrano iray